Ampidino Avast Free Antivirus 2021 ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (0.22 MB)
Ampidino Avast Free Antivirus 2021,
Avast Free Antivirus, izay manolotra rafitra fiarovana viriosy maimaimpoana ho anireo solosaina nampiasainay tao an-tranonay sy tany am-piasana nandritra ny taona maro, dia novolavolaina sy havaozina manoloana ny fandrahonana virtoaly.
Ny solosaina rehetra mampiasa Internet, ao anaty tamba-jotra na dia tsy mifandray aminny Internet aza, tsy mifandray aminny tamba-jotra na aminny Internet, dia iharanny risika virosy. Avast Free Antivirus, izay azontsika atolotra ho programa antivirus manan-kery mba hilamina manoloana anio loza io, dia tena mahomby aminny famaritana virus sy ny fanesorana virus. Avast Free Antivirus dia ahitana motera fandinihana virus manokana sy motera fandinihana virus AVG. Mampitombo ny haavonny fiarovana anao izany.
Ahoana ny fametrahana Avast?
Niezaka izahay nanazava ny fomba fametrahana Avast Free Antivirus, iray aminireo programa antivirus be mpampiasa indrindra aminny solosaina, aminny horonantsary etsy ambany:
Avast Free Antivirus dia misy singa samihafa. Ny singa CyberCapture dia azo faritana ho toy ny ati-doha famantarana ny virus izay mamorona ny hazondamosinny rindrambaiko. Behaviour Shield kosa dia miantoka ny fanaraha-maso tsy tapaka ny solo-sainanao aminireo hetsika mampiahiahy. Ny Avast Password Vault dia tsy manampy anao hitazona ny teny miafinao fotsiny, fa mamonjy anao koa ny olana aminny fidirana tenimiafina isaky ny mijery Internet ianao. Avast Browser Cleanup dia manadio ny browser-nao, manafaka anao aminny add-on browser tsy ilaina izay manova ny motera fikarohana sy pejy fandraisana an-tranonkalanao. Avast Wi-Fi Inspector dia miantoka ny fiarovana ny tambajotranao tsy misy tariby. Smart Scan, miainga aminny tenimiafinao tsy azo antoka ka hatraminny plug-in manimba hatraminny lozisialy efa antitra miaraka amina scan iray; mahita fahalemena mamela ny malware hiditra ao aminny rafitra.Noho ny fanavaozana ny lozisialy, ny programa rehetra napetraka ao aminny solo-sainao dia havaozina hatrany hatrany. Ny Rescue Disk, izay fomba tsotra indrindra hanesorana ireo viriosy tena mandaitra izay afaka miditra lalina ao aminny rafitranao ary mety hipetraka hatraminny voalohany aza, dia anisanireo fitaovana miaraka aminny Avast Free Antivirus.
Antivirus: mamaky sy manakana ireo viriosy, malware, spyware, ransomware, ary scam aminny phishing ny famakafakana an-tsaina.
Fiarovana aminny fitondran-tena: miaro anao aminny fandrahonana tsy misy andro sy ransomware aminny alàlanny fitiliana ireo fihetsika mampiahiahy.
CyberCapture: Manokana ireo rakitra tsy fantatra. Noho izany, ireo rakitra dia azo dinihina ao anaty rahona mba hamaritana raha azo antoka izy ireo na tsia.
Anti-phishing: misoroka ho azy ny fanaovana hosoka sy tranokala sandoka, tsy mila fanitarana browser (plugins).
WiFi Inspector: mitazona ireo hackers aminny alàlanny fitadiavana ireo fahalemena ao aminny tamba-jotra tsy misy tariby ao an-tranonao.
Fanavaozana ny lozisialy: mitazona ny fanavaozana ny lozisialy mba hamahana ny fahalemenny fiarovana sy hanatsarana ny zava-bita.
Tenimiafina: tazomy ny kaontinao rehetra aminny tenimiafinao tokana.
Fanadiovana ny Browser: Esory ny baraovana sy ny add-on hafa izay tsy tadiavinao na tsy ilainao aminny browser-nao.
Disk Famerenana: Mamorona sary kapila fanarenana aminny kapila CD na USB hanombohana rehefa voanny virus ny rafitra izay manakana azy tsy hanomboka.
Fiovana ho avy aminny Avast Update 20.10.2442
Fiarovana ny teny miafina - Miaro ny tenimiafinao koa izahay aminny kinova beta anny mpitety. (Chrome, Edge, Firefox ary AVG Browser azo antoka - Andininy Premium ihany)
Fanatsarana ny kapila fanarenana - Afaka mankalaza ny fahafantarana fa miasa ho azy ireo indray ity mpampiasa Windows 7 ity, ary nohatsarainay ny zava-bitany ary nataonay antoka fa manadio tsara ireo .DLL mifandraika aminny mpampiasa rehetra izy io.
Fanamboarana bibikely - Ny fanarenana bibikely mahazatra izay mahatonga ny antivirus ho matanjaka fotsiny
Inona no Vaovao Miaraka aminny Avast Free Antivirus Update 20.9.2437
CyberCapture - Tsy nahazo fampandrenesana ve? Azonao atao izao ny mahita ny valinny fisalasalana mampiahiahy izay natolotrao taminny Threat Labs ao aminny foibe fampandrenesanao
Fiarovana tenimiafina miovaova - Ankoatra Chrome sy Opera, azonao atao izao ny miaro ny Microsoft Edge sy ny ankafizintsika manokana, Avast Secure Browser.
Mifidiana endri-javatra - Fidio ireo endri-javatra premium tianao indrindra na alefaso ny hevitrao aminny fiasa vaovao. Mandehana aminny Menu> Momba ary lazao aminny Avast ny safidinao (ho anny mpampiasa Premium ihany no misy)
Fanatsarana ny fahombiazanny asa - Ireo singa antivirus anao dia hihombo haingana kokoa noho ny famoahana ny serivisy lehibe sy ny VPS.
Fanohanana fidirana lavitra
Fiarovana mifototra aminny rahona
Fifanarahana Tiorka kisarisary
Haben'ny rakitra: 0.22 MB